Semalt Inotaura NezveZvashanu Nzira Dzakasiyana-siyana Kuti Udzivirire Yese Website YepaIndaneti Usashandisa
Dzimwe nguva tinoda kuwana zvigadzirwa zvepaiti patinenge tisina kubvumirana. Nokuda kweizvi, tinofanira kuchengetedza mafaira ayo, asi zvizhinji zvekubata mabasa hazvipi izvozvi. Tinogona kuda kutevedzera chimiro chesaiti yakakurumbira, pamwe nekutsvaga kuti maCss kana HTML mafaira akaita sei. Chero chii chingave chiripo, pane nzira dzakasiyana dzekudzivirira yose yewebhu yekutambira kwekusaenda kune imwe nzvimbo. Kushandisa imwe yezvishandiso zviri pasi apa, unogona kuvimba nechivimbo nzvimbo yese kana nhamba inodiwa yemapeji. Pose pavanoda kuvimbiswa, unokwanisa kushandura shanduro dzavo dzekusununguka uye kuti urege kubhadhara chero chipi zvacho chezvikwereti zvepayimusi. Zvishandiso izvi zvinonyanya kukodzera kutanga uye mabhizimisi makuru.
HTTrack chirongwa chakakurumbira kana software yekuchera imwe webhusaiti. Shandisi yaro-yakabatana uye yemazuva ano shanduro yemabhiza exponentially inobatsira basa revashandisi. Iwe unongoda kuisa URL yewebsite yaunoda kuidzika uye kuikumbira iyo kubvumirana kwekutsvaga.
Unogona kukopa iyo webhusaiti yose kana kuisa mapeji akawanda kuti uite kuti adzivirire pane dambudziko rako rekushandisa. Iwewo unofanirwa kutsanangura kuti ndezvipi zvakabatana zvakabatana zvaunoda kuzarura kuti zvikanganwe. Kana faira chaiyo inotora nguva yakareba kuti ikwanise kubudiswa, zvinokwanisika kubvisa purogiramu yacho pakarepo.
Getleft iri purogiramu itsva uye yemazuva ano ine zvakawanda zvezvinhu uye unoshandiswa-user friendly interface. Kamwe yakadhindwa uye yakatangwa, unofanira kudhinda "Ctrl + U" kuti utange. Pinda URL uye chengetedza zvinyorwa. Pamberi pekutsvaga kunotanga, Getleft ichakubvunza kuti ndeapi mafayela iwe waunoda kutora uye kana akabatanidza magwaro nemifananidzo. Kamwe kuregera kwatopedzwa, tinogona kutarisa webhusaiti yewebhu yega yega yega.
Nzvimbo dzeNzvimbo dzacho dzakafanana neyeItleft neHTTrack. Iwe unofanirwa kupinda muwetaiti yewebsite uye wobva waikurira pane dambudziko rako. Vashandi vanokumbirwa zvakakosha sezita rewebsite uye kuti rinofanira kuchengetwa kupi. Iwe unogonawo kusarudza zvaunoda kusarudza uye kugadzirisa zvirongwa zvayo.
Ne Cyotek WebCopy, unofanirwa kushandisa zvinyorwa zvinyorwa zvekutendesa. Iwe unogonawo kugadzira mitemo neyi purogiramu yezvino uye ugoona nzvimbo yese yakakonzerwa pakarepo kuti ishandiswe kunze kwekushandisa. Huwandu huwandu hwewebsite yakaderedzwa uye nhamba yose yefaira inoratidzwa mukona yakarurama yedesktop yako.
Wikipedia haiti kuti tishandise zvishandiso zvinowanzoitwa seInde. io naKimono Labs kuti vawane data yakadhindwa kuitira kushandiswa kwekushandisa kunze kwekushandisa. Pane kudaro, inogara ichikurudzira Wikipedia Dumps sezvo purogiramu iyi inogutsikana nemigumisiro yehutano. Unogona kukopa iyo webhusaiti yose mumutauro we XML, kubvisa dambudziko rinobatsira webhusaiti yako kana bhizimusi rekutsvaga Source .